Uvavanyo lweAir France i-IATA Pass Pass kwiindiza zeMontreal-Paris
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » Uvavanyo lweAir France i-IATA Pass Pass kwiindiza zeMontreal-Paris
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • Utyalo mali • iindaba • Xanduva • Technology • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Inkqubo yokulinga iya kugxila ngokungqongqo kwiindiza zeAir France eziphuma eMontréal-Trudeau zisiya eParis-Charles de Gaulle, ukusukela nge-24 kaJuni ukuya nge-15 kaJulayi ka-2021.
I-Air France iba yinqwelomoya yokuqala yokwazisa ngenkqubo yokulinga yeenqwelomoya eziphumayo kwisikhululo senqwelomoya saseMontréal-Trudeau.
Injongo yeNkqubo kukuvavanya usetyenziso lweSelfowni yoThutho loMoya lwaMazwe ngaMazwe lwe-IATA.
Eli tyala lisimahla kubathengi kwaye linikezelwa ngokuzithandela.
Ngokongeza iMontreal-Paris kwiinqwelomoya zayo ezilingana ne-IATA Travel Pass, Umoya waseFrance iba yinqwelomoya yokuqala yokwazisa ngenkqubo yokulinga yeenqwelo moya eziphuma e Isikhululo senqwelomoya saseMontréal-Trudeau kudijithali iziphumo zovavanyo ezingalunganga ze-COVID-19. Iqhuba inkqubo ngokudibeneyo neQela lezeMpilo leBiron.
Inkqubo yokulinga iya kugxila ngokungqongqo kwiinqwelomoya zeAir France eziphuma eMontréal-Trudeau zisiya eParis-Charles de Gaulle, ukusukela nge-24 kaJuni ukuya nge-15 kaJulayi ka-2021. abahambi ukuya:
Jonga kwiimfuno zokungena ze-COVID-19 zamva nje kwilizwe labo lokuya
Zibe neziphumo zovavanyo lwe-COVID-19 olwenziwe kwiilebhu zamaqabane ezithunyelwe ngqo kwi-app
Gcina la maxwebhu ngokukhuselekileyo kwi-app ukuze babonise iinqwelomoya kunye nabasemagunyeni ukuba bayazifezekisa iimfuno ezifanelekileyo zokungena, ngaphandle kokuveza ulwazi oluthe kratya malunga nempilo yabo
Eli tyala lisimahla kubathengi kwaye linikezelwa ngokuzithandela. Kuvulelekile kubathengi abahamba ngeenqwelo moya ezisebenza ngeAir France eParis njengendawo yokugqibela.
Uvavanyo luya kwenziwa kwiziko leQela lezeMpilo laseBiron kwiziza ezikwisikhululo senqwelomoya saseMontréal-Trudeau. Abagibeli abafanelekileyo baya kufumana isaziso kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba baye eParis. Ukuvavanywa kunokwenzeka ngomhla wokuhamba kwabahambi abaneminyaka eli-11 nangaphezulu abangakhange bagonywe okanye bafumane idosi yabo yokuqala, njengoko kufuneka beveze ubungqina be-PCR okanye iziphumo zovavanyo lwe-antigen ezikhutshwe kwisithuba seeyure ezingama-72 bemkile ngena eFrance.
Ngawaphi amanyathelo ekufuneka elandelwe ngumhambi?
Umhambi ukhuphela usetyenziso lwe-IATA Travel Pass olufumaneka kwiVenkile yeApple nakwiGoogle Play kwaye ayenze isebenzise ikhowudi edluliswe yiAir France.
Ubeka incwadi kwi-PCR yakhe okanye kuvavanyo lwe-antigen kwiwebhusayithi yeBron Health Group. Ngexesha lovavanyo, ucela ukuba iziphumo zidityaniswe ngokuthe ngqo kwi-IATA Travel Pass
Kwisikhululo seenqwelomoya, umhambi uya kwikhawuntara yeAir France SkyPriority. Xa ejonga indlela yokuhamba, uzisa umnxeba endaweni yesiphumo esishicilelweyo